Koorsooyinka sanad-dugsiyeedka: Marka loo doorto Tonka Online qayb ka mid ah jadwalkaaga caadiga ah maalin dugsiyeedka iyo inta sannad dugsiyeedku socdo, wax lacag ah lagama qaadayo koorsada Tonka Online.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad u qaadaneyso koorso Tonka Online ah Dayrta ama Jiilaalka fasal dheeraad ah, waxaa jira lacag dheeraad ah. Koorsooyinka xagaaga sidoo kale waxay u baahan yihiin lacag dheeraad ah. Hoos ka eeg qiimaha.
Koorsooyinka sanad dugsiyeedka Dheeraadka ah ee 0.5 koorsooyinka = $ 375 / 0.5 koorso amaah ah
Sannad Dugsiyeed Dheeraad ah Fit A iyo Fayoqabka B = $ 275 / 0.5 koorsada dhibcaha
Koorsooyinka amaahda xagaaga 0.5 = $ 375 / 0.5 koorso amaah ah
Summer Fit A iyo Wellness B = $ 275 / 0.5 koorsada amaahda
Lacag-bixinta: Qoysaska Minnetonka, habka doorbididda lacag-bixinta waa khadka tooska ah ee loo maro Skyward Fee Management. Qoysaska aan degmada ahayn, xafiiska ganacsigu wuxuu u diri doonaa qaansheeg. Tixraac Waraaqdaada Soo-dhaweynta ama xiriirka su'aalaha la iska waydiiyo ee ku saabsan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan lacag-bixinta iyo Nidaamka Lacag-celinta ee Tonka Online.